डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि फेरि हातपात, महाकाली अञ्चल अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द
असोज २२, २०७४ आइतवार २०:३०:०० प्रकाशित
महेन्द्रनगर- महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको भन्दै आजबाट सेवा बन्द गरिएको हो।
शनिबार राति सुत्केरीकालागि ल्याइएकी एक महिलाले बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको मृत्युभएपछि अस्पतालमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। सुत्केरीका आफन्तले डिउटीमा रहेका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको र अस्पतालमा समेत तोडफोड गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
डिउटीमा रहेका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरेका कारण अस्पतालमा कार्यरत सबै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार शनिबार बेलुका भीमदत्त नगरपालिका १ बारकुन्डाकी गर्भवतीलाई अस्पतालमा ल्याइएको थियो। बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको मृत्यु भएपछि आफन्त आक्रोशित भएका थिए। आफन्तले लापरबाहीका कारण बच्चाको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्।
'सुरुमा पाठेघरको मुख पूरै खुलिसकेको थिएन्, बच्चाको टाउको बर्थिङ क्यानलमा पुगेर अड्कियो,’ उपचारका क्रममा रहेका डा. सत्य कोइरालाले भने, ‘त्यो अवस्थामा कि त महिलाले नै प्रेसर दिनुपर्छ नभए टाउकोमा भ्याकुम लगाएर बच्चा निकाल्नुपर्ने हुन्छ।’ टाउकोमा भ्याकुम लगाएर बच्चा निकालेपछि चेकजाँच गर्दा मृत्यु भइसकेको उनको भनाइ छ।
टाउको बर्थिङ क्यानलमा अड्किएपछि बच्चाले दिसा गरेको र सोही दिसा नाक, मुख हुँदै फोक्सोसम्म पुगेकाले बच्चाको मृत्यु भएको हुन सक्ने उनले बताए। ‘सुरुमा सुत्केरी व्यथा लागेपछि ल्याउदा चिकित्सकले शिशु र महिलाको अवस्था सबै राम्रो छ भने’ सुत्केरी हुन आएकी सुत्केरीकी सासू कमला विष्टले भने चिकित्सकको लापरबाहीकै कारण बच्चाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेकी छन्।
बच्चाको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले चिकित्सक डा. सत्य कोइरालामाथि हातपातको प्रयास गरेका हुन्। सो क्रममा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीका जवान प्रतासिंह बोहराको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको टाउकोमा ४ टाँका लगाइएको छ।
प्रहरीले आक्रमण र तोडफोडमा संलग्न रहेको भन्दै ५ जना बिरामीका आफन्तलाई पक्राउ गरेको छ। आकस्मिक बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु अचानक बन्द भएपछि उपचारका लागि आएका बिरामीहरु मर्कामा परेका छन्। उनीहरु उपचार नै नगराई घर फर्किन वाध्य भएका छन्।